Kamiino Ka Kala Dhacay Gobalada Bakool Iyo Sh/hoose. – Calamada.com
Kamiino Ka Kala Dhacay Gobalada Bakool Iyo Sh/hoose.
calamada October 22, 2016 1 min read
Wararka laga helayo gobalka Bakool ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay weerar dhabba gal ah loo dhigay kolanyo ka tirsan Kufaarta Xabashida Itoobiya oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobalkaasi.
Kamiinka waxa uu sigaar ah kaga dhacay wadada isku xirta deegaanka Ceelgaras iyo degmada Xudur oo ka wada tirsan gobalka Bakool ee dhaca Konfur Galbeed ee dalka Somali.
Wararkii ugu dambeeyay ee Kamiinka ayaa sheegaya in mid ka mid ah gaadiidka Xabashida Itoobiya weerarka dhabba galka ah lagu gubay tiro askar Itoobiyaan ahna baqti iyo dhaawac ay ku noqdeen weerarkaasi.
Dhanka kale weerar dhabba gal ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka Numbar50 ee gobalka Shabeelada hoose ayaa la xaqiijiyay in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen tiro askar oo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada Federaalka.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacadda Andalus 21-01-1438 Hijri.
Next: Dagaal Dib Kaga Qarxay Magaalada Gaalkacyo.